Mvulo-Sat ngo-7:00AM ukuya ku-9:00AM
Iimveliso zeeMveliso zoMbumba
Iimveliso zaseKhaya Mold
Iworkshop & neZixhobo
Ukuhamba kwenkqubo yokungunda
Itshathi yokuHamba yoHlolo lokuMngunda
Molo, yiza ukudibana neemveliso zethu!
Iplastiki yokubumba isitya sokuhlambela
Inkqubela phambili yokubumba kunye neteknoloji iyakhula ngokukhawuleza. Itekhnoloji entsha, izixhobo ezitsha, kunye nokubumba okutsha kuye kwaqhuba izakhiwo ezintsha kunye neemveliso ezintsha zokubumba. Iimpawu zokuqhuba iteknoloji zicacile. Ishishini lokungunda litshintshile ukusuka ekulandeleni ukuya kwinqanaba elitsha lokulandelela kunye nokuhambelana ...
Isitulo seplastiki ngundo
1. Hlalutya inkqubo yokubumba imveliso, isakhiwo sokubumba kunye nenkqubo yokuvelisa. Qinisekisa ukuba ubomi bomngundo wesitulo seplastiki bungaphezulu kwamaxesha esigidi esi-1. 2. Kuyimfuneko ukuyila isitulo esipheleleyo seplastiki isakhiwo sokungunda kunye neenxalenye zokucubungula, kwaye ubeke iimfuno zendibano kunye ne-injec ...
Udonga lwePlastiki yeentyatyambo zeentyatyambo Mold
Kukho iimilo ezininzi zeengqayi zeplastiki ezifakwe eludongeni, ezinokuthi zohlulwe zibe zingqukuva, isikwere, kunye ne-oval. Iingqayi zeentyatyambo zePlastiki zinokunkcenkceshelwa amaxesha amaninzi, kwaye inompompo ongcono. Abantu abaninzi ngoku bakhetha iintyatyambo zeentyatyambo zeplastiki ukutyala izityalo ezifakwe emanzini. Zininzi iintyatyambo zeplastiki ezixhonywe eludongeni...
Logistics Fruit Basket Mold Customization
ngu admin on 21-12-06
Ubomi bomngundo bubhekisa kwixesha elisuka ekuqaleni kovavanyo ukuya ekukhutshelweni komngundo. Kwinqanaba loyilo lokungunda kwibhaskithi yeziqhamo, kuyimfuneko ukucacisa uhlobo lwebhetshi yemveliso okanye inani elipheleleyo leenxalenye zemveliso zokungunda ezilungele ukungunda. Ngaphantsi kwesiqhelo...
Ibhokisi yokugcina izinto zokudlala yabantwana ukusetyenzwa nokuveliswa
Ibhokisi yokugcina izinto zokudlala yabantwana kusetyenzwa nokwenziwa kongundo lwe-Aojie iminyaka eli-15 uncedo lwe-Aojie Mold ekwenzeni iibhokisi zokugcina izinto zokudlala zabantwana. Inkqubo yokubumba: ukwamkelwa komyalelo → ukuphononongwa komzobo → uyilo lokubumba → ukulungiswa kwemathiriyeli → ukuhlolwa →...
Ukwenza ngokwezifiso ukubumba kwebhokisi yokugcina imoto
ngu admin nge 21-12-02
Iimfuno zobugcisa zimi ngolu hlobo lulandelayo: 1. Hlalutya inkqubo yokubumba imveliso, isakhiwo sebhokisi yokugcinwa kwebhokisi yemoto kunye nenkqubo yokuvelisa. Qinisekisa ukuba ubomi bomngundo buhlangabezana neemfuno zabathengi. 2. Yila ubume obupheleleyo bokubumba kunye namalungu okucubungula kwisitofu...
Ziziphi iingxaki ekufuneka ziqwalaselwe kwinkqubo yoyilo lokubumba?
1. Ubukhulu bodonga kufuneka bufane ngokusemandleni, kwaye i-angle yedrafti kufuneka ibe nkulu. 2. Inxalenye yenguqu kufuneka ihambe kancinane kwaye igudileyo. 3. Isango. Imbaleki kufuneka ibe banzi kangangoko kunokwenzeka, ngqindilili kwaye ibemfutshane, kwaye indawo yesango kufuneka imiselwe ngokokunciphisa inkqubo yocondensation, ...
Ngawaphi amalungu esitofu sokungunda?
I-mold yenziwe nge-mold ephathekayo kunye ne-mold fixed. I-mold ephathekayo ifakwe kwi-template ehambayo yomshini wokubumba umjovo, kwaye i-mold esisigxina ifakwe kwi-template emiselweyo yomshini wokubumba umjovo. Isixokelelwano sokumasango Inkqubo yokungena ibhekisa kwindawo yombaleki...
Yiyiphi imigaqo yokukhethwa kwendawo yesango lokubumba iplastiki
Isikhundla sesango sinempembelelo enkulu kwi-deformation yesitofu esibunjiweyo inxalenye kwaye inefuthe elithe ngqo kumgangatho wesitofu esibunjiweyo. Ukukhetha okungafanelekanga kwendawo yesango kuya kubangela ukuguqulwa kwendawo yokubunjwa kwenaliti kunye nezinye iziphene ezininzi. Ukhetho lwe...
Zeziphi iimfuneko zemathiriyeli ekrwada yeplastiki yokubumba inaliti yembaleki eshushu?
Ngokomgaqo, okoko nje uyilo lokungunda ludityaniswe nokusebenza kwamalungu eplastiki, phantse zonke ii-thermoplastics zinokubunjwa ngokubumba inaliti yembaleki eshushu, kodwa okwangoku ezona zisetyenziswa kakhulu ekubunjweni kwenaliti yembaleki eshushu yi-polyethylene, i-polypropylene, i-polystyrene, i-Polyacrylonitrile, ...
Yeyiphi imigaqo kunye neempawu zokubumba inaliti yembaleki eshushu?
Isitofu sokungunda sembaleki eshushu ikwabizwa ngokuba ngumngundo wenaliti engena-runnerless. Umahluko phakathi kwenkqubo yokugalela kunye nenkqubo eqhelekileyo yokugalela kukuba ngexesha lenkqubo yonke yokuvelisa, iplastiki kwinkqubo yokugalela ihlala ikwimeko etyhidiweyo, kwaye ilahleko yoxinzelelo ngexesha lokutofa incinci, i...
Uyila njani ukubumba okuntsonkothileyo kwimibhobho yokugoba yemoto?
ngu admin on 21-11-23
1. Beka ukhuseleko kunye nokulula kwemveliso (ukucubungula / ukudibanisa / ukubumba i-injection) kuqala. "Umthengi nguThixo" ayisiyonjongo yoshishino lwenkonzo kuphela, kodwa nenjongo yethu. Ukubumba isitofu, ukudibanisa yinto yokuqala, kwaye ukulungeleka kwesibini. 2. Landela isimo somthengi...
I-Aojie Mold Co.,Ltd.
Ngemibuzo malunga neemveliso zethu, nceda ushiye i-imeyile yakho kuthi kwaye uqhagamshelane nathi kwiiyure ezingama-24.